BarcampPKU ( Pakokku _2016 ပုံရိပ်များ ) | Myanmar Black Hacking
0 BarcampPKU ( Pakokku _2016 ပုံရိပ်များ )
Barcamp Pakakku 2016 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား — in Pakokku.
Myanmar Security Forum(MSF) မှ Security Awareness အကြောင်းပြောကြားခြင်း
MSF Speaker - Min Ko Ko
MSF Speaker - Hlaing Thu Tun
Computer နဲ့ သက်ဆိုင်သမျ သိလိုရာမေး အခန်းတွင် MSF မှ အားလုံးစုပေါင်းပြီး မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြား
MSF Speaker - Ko Nyan
IT အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့အလုပ်အကိုင်အကြောင်း ကိုဥာဏ်မှ ရှင်းလင်းပြောကြား
MSF Speaker Group Photo
Short Video - ကြည့်ရန်
ဓါတ်ပုံမူရင်း - Myanmar Security Forum - MSF
Labels: 2016 Barcamp . Hacking Tutorials . Knowledge